Ebumnuche Ebumnuche Nchọgharị Nchọpụta Ihe: Na Somefọdụ Ndụmọdụ SEO Na-enye Ndụmọdụ | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 1, 2018 Tọzdee, Febụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Na ngwụcha izu a, ezutere m kọfị na enyi m na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ ụlọ. Ọ na-akwa arịrị na ụlọ ọrụ ya na ụlọ ọrụ SEO nwere nkwekọrịta na afọ ole na ole gara aga mana ọ maghị ma ha na-alaghachi na ntinye ego maka ego ha na ha nọrọ.
Mkpokọta ahụ karịrị $ 100,000 n'oge ndụ ya na onye ndụmọdụ ahụ. Ha abụọ nwere nchegbu na ọ bụrụ na ha akwụsị, ha ga-efunahụ ụzọ ọchụchọ na-eduga… ma ọ bụrụ na ha aga n'ihu, ha ga-atụfu ego n'ụlọ mposi. Ajụrụ m ha ajụjụ 3:
Kedu otu SEO siri gosipụta nloghachi ha na ntinye ego? Otu n'ime ihe mbụ anyị na ndị ahịa anyị na-eme bụ ọrụ zuru oke iji hụ na a na - amata ụzọ ọ bụla - ekwentị ma ọ bụ web - dị ka ụzọ sitere na engines ọchụchọ. Ọbụna na Okwu Ọnụ, anyị na-arịọ ndị ahịa anyị mgbe niile na-ajụ ndị ahịa ha otu ha ga-esi anụ ahịa ahụ. Ozi a nyefere ndị ahịa ha ma ọ bụ CRM ha ebe ha nwere ike ijikọ mgbanwe ọ bụla iji chọọ okporo ụzọ. Ọbụghị naanị na onye ndụmọdụ ahụ mere nke a, ọ mgbe jụrụ ha ma ha na-azụ ahịa site na ahịa okporo ụzọ ma ọ bụ na ha anaghị azụ ahịa.
Y’oburu tufuo ulo oru SEO echi, olee oru gha akwusi? Mgbe anyị na-arụ ọrụ SEO, anyị na-enyocha isiokwu, na-enyocha ndị asọmpi, na-ede edemede, na-eme eserese, na-enweta foto ndị ahịa, na ọbụna na-edekọ vidiyo iji gbalịa ịkwalite ibe ọ bụla iji mee ka ha bụrụ ihe ịtụnanya na ndị ọzọ. Anyị, n'ezie, na-ebuli saịtị ahụ ma hụkwa na njem ndị ahịa doro anya nke ọma ka ịchọọ igwe nyocha na-eduga na ụdị kọntaktị maka nzukọ ahịa a na-ahazi, nnwale n'efu, nbudata n'efu, ma ọ bụ ihe ngosi. N'ime afọ 3, onye ndụmọdụ SEO a mgbe metụrụ saịtị ha aka.
Kedụ ka ị si aga ọkwa n’usoro ndị anaghị aha akara nke mpaghara ma ọ bụ nke mba? Ndị na-ahụ maka ndụmọdụ SEO na-agbasasị ihe ndị dị ka ị na-ogo karịa ọnwa gara aga na ọnụọgụ X nke isiokwu. Akwa… mana gini bu okwu ndia? Ọ bụrụ na ndị Keywords gụnyere aha gị ụlọ ọrụ, nke ahụ bụ aka ma ọ bụghị search engine njikarịcha. N'ezie, ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịkwado maka aha ụlọ ọrụ ya, aha ngwaahịa, ma ọ bụ ndị nọ n'ime nzukọ ahụ. Ezigbo ROI nke njikarịcha njin ọchụchọ na-ebugharị mkpụrụ okwu na-abụghị akara ma gosipụta ebumnuche iji nyochaa mkpebi ịzụta ihe ọzọ. N'ime afọ atọ, onye ahịa a họọrọ naanị nsonaazụ 3 kachasị maka okwu akara. Oge kacha nso akpọrọ aha # 6.
Naanị ihe kpatara anyị ji eme SEO bụ ịchụpụ azụmaahịa. Nanị ụzọ ị ga-esi gosi na SEO ziri ezi bụ azụmaahịa ọhụrụ. Amaghị m otu ị si kwuo na ị na-eme atụmatụ njikarịcha njikarịcha maka onye ahịa na-enweghị inye ha usoro, nyefee ma kwalite ọdịnaya, yana ịnye akụkọ ziri ezi nke gosipụtara mbọ gị. Ọ bụghị n'otu ntabi anya… mana n'ime ọnwa ole na ole onye ahịa kwesịrị ịhụ ndị na-eduzi edemede na saịtị ahụ na-enweta okporo ụzọ.
Kedu ihe SEO Agency na-eme n'ezie?
Enwere naanị otu ihe onye ndụmọdụ a nwere ike ịme… njikọ azụ. M wetara ụfọdụ akụkọ ndị ọzọ na backlinks ma chọpụta ole na ole saịtị nke ụlọ ọrụ ahụ na-eziga isiokwu na nke ahụ bụ 300 okwu otu na njikọta ọgaranya isiokwu laghachi na adreesị weebụ onye ahịa. Enwere naanị otu nsogbu…
Ọ naghị arụ ọrụ.
Saịtị ndị ahụ nwere obi ebere na ekesara njikọ ahụ ma ha dị njikọta maka ndị ahịa ya (ma ọ bụ ndị ọkachamara SEO ọzọ). Saịtị ahụ ekwenyeghi, enweghị ọkwa, ma ọ nweghị ịma ọkwa maka ndị ahịa.
Nke a bụ atụmatụ eji arụ ọrụ… mana Google agbanweela algọridim ya ọtụtụ oge kemgbe 2011 (lee infographic dị n'okpuru) iji kwụsị egwuregwu a nke nsonaazụ ọchụchọ engine. Taa, njikarịcha njinchọ ọchụchọ chọrọ ọtụtụ ihe okike na mbọ.
Gịnị Ka M Ga-eme Dị Iche?
Otu onye ọrụ ibe na ụlọ ọrụ na-akpọ atụmatụ anyị na-agbaso mmụta, kama ijikọta njikọ. Anyị na-etolite atụmatụ dịịrị ndị ahịa anyị gụnyere nyocha, edemede, infographics, micrographics na vidio ndị lebara anya nke ọma. Ozugbo anyị mepụtara ọdịnaya ahụ, anyị na-akwalite ọdịnaya ahụ site na atụmatụ ịkwụ ụgwọ na mmekọrịta ọha na eze, na-akwọ ụgbọala dị mkpa, njikọ dị elu na isi mmalite. Enweghị egwuregwu, enweghị hacking, enweghị aghụghọ… naanị ọrụ siri ike.
N'ụzọ na-emegide onwe ya, ndị bi na Bubblegum mere atụmatụ a nke ọma na infographic ndị a, Ebum n’uche Ebumnuche Nchọgharị. Ọ bụ infographic mara mma, nyochara nke ọma, ma zuo oke maka ndị na-ege m ntị. Ma maa gịnị? Ha nwetara njikọ ahụ!
Oh, ma ọ bụrụ na ị pịa site na infographic, ị ga-ahụ a mara mma mmekọrịta peeji nke na-enweta Mbido nke SEO!
Tags: akụkọ binggoogle akụkọ ihe mere emeakụkọ ihe mere eme nke ọchụchọakụkọ ihe mere eme nke engines ọchụchọnyocha ọchụchọsearch enginesAakụkọ ihe mere emeyahoo akụkọ ihe mere eme
Feb 15, 2015 na 7:20 PM
Hụ isiokwu ahụ n'anya. Echefuola m banyere mmelite Florida
Feb 27, 2015 n’elekere 5:17 nke abali
Zingtụnanya post maka beginners nakwa maka òtù na-agbalị na-enye ihe kasị mma ọrụ na-achọsi ike inye ndị kasị mma ikuku ka ọrụ. Abụ m otu n'ime ha na ndị otu a na - enyere ndị ọrụ ha aka ịmụ ma na - aga n’ihu. Obi dị m ụtọ ịgụ akwụkwọ ozi dị otú ahụ na ihe ọmụma ahụ okike. Ihe niile dị ịtụnanya. Daalụ iji nyere anyị aka ịmata nkọwa nke ọrụ SEO.